Babalku wuxuu si cad noo tusayaa jidka loo maro nolol waarta. Kow waa inaan aqoonsanaa inaan alle dambi ka galnay” waana la wada dambaabay oo sarreynti alle meel looga wada dhacay” (Romans 3:23). Annagoo dhan waxaan sameynay waxyaalo aan alle farxad galin, oon ciqaab ku astaahilnno. Mar haddii dambiyadayada oo dhan ay ugu dambeyntii liddi ku yihiin ilaah weligii jira,. waxaa keliya oo nagu haboon waa ciqaab abid ah. “ ajarka ama xukunka dembigu waa geeri, laakiin hadiyadda alle waa nolol abida oo loo marayo boqorkayaga ciise (Romans 6:23).
Hase ahaate ciise masiixi, dambi laawe (1 peter 2:22) wiilka dhabta ah oo ilaahay nin ayuu noqday (John 1:1,14) markaan wuxuu u dhintay inuu baxsho dembiyadayada. Ilaah wuxuu ku bandhigayaa sidaas suu noo jecel yahay: annagoo weli dambiiliyaal ah, Ciise annaguu noo dhintay” (Romans 5:8). Ciise wuxuu ku dul dhintay macatabka (John 19:31-42) qaadanayana ciqaabtaan muteysanay (2 corinthians 5:21). Saddex maalmood ka dib wuxuu ka soo kacay dhimashadii (1 corinthians 5:14) caddeyeyna siduu uga adkaaday dambi iyo geeri. Naxariistiisa weyn wuxuu nagu siiyey dhalasho cusub oo rajo nool ah oon ku helnay dib u soo noolaashada ciise masiixi (1 peter 1:3).
Caqiido ahaan waa inan beddallo waxaan ka aaminsannahay ciise- qofka uu yahay, wuxuu sameeyey iyo sabata – badbaado darted (Acts 3:19). Haddan isaga rumeynno, rumeynno ku dhimashadiisa macatabka uu ku bixinayey dembiyadeenna waa nala cafin, waxaana heleynaa ballan qaad inaan jaano abid kuu noolaan doonno. Ilaahna saasuu dunida u jecel yahay oo waa kaa wiilkiisii keli ahaa baxshey, sidaas darted qof kasta oo rumeeyaa ma baabi’i doono ee nolol daa’n ah buu heli (John 3:16) Haddaad afkaaga ka qiratid ciisaa weyne ama boqor ah ood qalbigaagana ku rumeysid inuu ilaah ka soo toosiyey geeri, waa lagu bedbaadin (Romans 10:9). Rumayn keliya wuxuu ku sameeyey ciise macatabka waa jidka keliya oo saxda ah oo lagu gaari karo nolol aakhiroo abida., sidaasna waa laguu badbaadiyey, caqqido awgeed, adigana kaama iman ee waa hadiyad alle, shaqana laguma helo, cidnna kuma faani karto (Ephesians 2:8-9).
Haddaad rabtid inaadciise masiix aqbashid inuu badbaadiyahaaga noqdo, waa tan duco tusaale ah: Xasuusunow dhihidda ducadaan iyo tu kale toonna kuma badbaadin karaan, ciisood rumeysaa waa sida keliya ood uga badbaadi karto dembi. Ducadani waa un qaab aad ugu sheegi karto alle inaad rumesey, ugana mahad celineysid siduu kuu bedbaadiyey. “ilaahow waan ogahay inaan dembi kaa galay, oon ciqaab mutaystay, laakiin ciise masiixi baa qaatay ciqaabtii aan mutaystay, si aan asaga u rumeyoo oo la’iigu cafiyo. Adigaan ku rumeynayaa si aan u baabaado. Waad ku mahadsantahay sarreyntaada cajiibka ah iyo cafiskaaga. Nolol aahkiroo abida.